IATA inotsigira chitupa chekudzivirira cheEU digital COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » IATA inotsigira chitupa chekudzivirira cheEU digital COVID-19
nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chitupa chePan-European chinozivikanwa chekubaiwa chingave chakakosha danho rekupa hurumende kuvimba kwekuvhura miganhu yavo zvakanaka
International Air Transport Association (IATA) yakurudzira matavi ese eEuropean Union kuti atsigire danho kubva kuna Mutungamiriri weGreek, VaKyriakos Mitsotakis kuti vabvumirane chitupa chekudzivirira chakajairika cheEuropean COVID-19 icho chichagonesa avo vakabaiwa jekiseni kufamba vakasununguka mukati meEurope vasina COVID -19 kuyedza.
Mutsamba yakavhurika kuna Ursula von der Leyen, Purezidhendi weEuropean Commission, uye akateedzera kune vanogadzira mutemo muEU, Iată Director General uye CEO Alexandre de Juniac vakadana EU States kuti irongedze mutemo unoona kuti Europe inowana zvakachengeteka hupfumi uye zvemagariro bhenefiti yekuvandudza rusununguko rwekufamba, kutanga neavo vakabaiwa majekiseni.
”Chirongwa cheMutungamiri Prime Minister Mitsotakis chinofanirwa kutorwa nechimbi-chimbi neKomisheni nenyika dzese dziri nhengo. Kubaya nhomba kiyi yakakosha yekuvhurazve zvakachengeteka miganhu uye kukurudzira kusimudzira kwehupfumi. Chitupa cheEuropean-chinozivikanwa chekudzivirira chingave danho rakakosha mukupa hurumende kuvimba kwekuvhura miganho yavo zvakachengeteka, uye vafambi chivimbo chekubhururuka vasina chipingaidzo chekuisa vanhu voga, "akadaro de Juniac.
Chirevo cheGreek ndechegwaro rakabvumiranwa rekubayisa nhomba iro rinogona kubatsira "mukumisazve kufamba pasi rose, chinova hwaro hwekumisazve zviitiko zvehupfumi kumatambudziko epamberi." Icho chinodikanwa cheyakawiriranwa yakachengeteka nendege restart chiri chimbi chimbi kupfuura nakare pamberi peshure kwekuvandudzwa kwekukiya uye kutenderera kwekufamba pasirese.
Sezvo hutachiona huchiuya pakupedzisira pasi pekutonga, kuyedza kugona kugona uye kubayiwa nhomba, de Juniac akasimbisa kukosha kwekuti hurumende dzigadzirire kumisazve rusununguko rwekufamba pamwe nekuronga kwakarongeka. Iko kuronga kunofanirwa kushandisa musanganiswa unobudirira wekudzivirira uye kuyedza kugona.
“Tiri mumazuva ane rima zvikuru nedenda iri. Asi matanho akaomarara akatorwa pamwe nekumhanyisa zvirongwa zvekudzivirira zvinofanirwa kutipa tariro yekuti tinogona kumisazve nerusununguko rwekufamba zvakachengeteka. Izvo zvinochengetedza mabasa, kurerutsa kushungurudzika kwepfungwa, kubatanidza zvakare mhuri uye kumutsiridza hupfumi Kuti uite izvi zvakachengeteka uye nemazvo, kuronga kwakakosha. Kurudziro yeMutungamiriri Mitsotakis yezvitupa zvekudzivirira ichave yakakosha kuita. Kufambira mberi kwekubvisa kana kudzikamisa kwega kunogona kuitwa nemaprotocol ekuyedza. Asi chatiri kuda izvozvi ndechekuti hurumende dzitange kushanda pamwechete zvakanyanya. Unilateral zviito zvehurumende zvakakwanisa kukurumidza kubvisa kubatana kwepasirese. Kuvaka patsva kunoda kubatana, ”akadaro de Juniac.
Vakuru venyika veEU vanosangana neChina China 21 Ndira uye chikumbiro cheMutungamiri Mitsotakis chichava pazano. Zvinotarisirwa kuti vachatungamira iyo Commission kuti itore danho nekuvandudza zvakafanana chitupa.